Nkuzi etemeete Harley Quinn na Nzọụkwụ 7 Dị Mfe - Ịma Mma
Nkuzi etemeete etemeete Harley Quinn nke ịchọrọ maka Halloween
Aha ya bụ Katie Friedman
Ole na ole echiche ejiji Halloween anaghị adịte aka ma dịkwa mfe ijikọ ọnụ karịa Harley Quinn. Ọ bụghị naanị na agba ya na -acha uhie uhie na egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ na -achasi ike maka Instagram; ha anaghị achọ ndidi ma ọ bụ nka achọrọ maka ọtụtụ etemeete Halloween. Ọzọ, na Joker ihe ndekọ ụlọ ọrụ na -akụri, na -aga dị ka ajọ nwa agbọghọ Gotham afọ a na -enwe mmetụta nke oge a.
N'iburu nke ahụ n'uche, anyị jikọtara onye na -ese ihe etemeete Aha ya bụ Lijha Stewart (nke a makwaara dị ka Queen of Halloween) iji mebie ndụmọdụ niile ịchọrọ iji kpoo etemeete Harley Quinn. Gụọnụ maka nkuzi ntụzịaka n'uju.
cute braided Hanbok eke ntutu isi
Otu esi eme N'onwe Gị Harley Quinn etemeete
Ọkwa ike: Mfe. Ọ bụrụ na ị nwere ike gbachapụ etemeete ma tụba ntutu gị n'ụdị pigtails nke abụọ, ị ga-enwe ike ime nke a enweghị nsogbu.
Ogologo oge achọrọ: Otu elekere, max.
Ihe ị ga - achọ:
-Ntọala matte kachasị amasị gị
-Matte, ntụ ntụ
-ọbara ọbara ọbara
-Ngwa ahịa ihu gị nke nhọrọ
-Acha uhie uhie na -acha anụnụ anụnụ
-Bens pensụl na -acha nchara nchara
-Anya na -acha ọbara ọbara na -acha anụnụ anụnụ (nhọrọ)
-teepu scotch (nhọrọ)
-nku anya ụgha (nhọrọ)
-eyeliner na -enweghị mmiri mmiri
-Kacha nzu ntutu na -acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ tee ntutu
Kwụpụ 1: Nwepụta ma gosipụta.
Ọ bụ ezie na akpụkpọ ahụ Harley na -acha ọcha na fim ahụ, iji mee ka ọ dịkwuo ndụ ma yie ihe, anyị na -agbagharị n'akụkụ ole na ole. Swipe mkpisi na -akpụgharị ala na ntì gị, n'ahịrị ntutu gị, n'okpuru egbugbere ọnụ gị, na n'ọkpụkpụ olu gị. Were mkpịsị aka gị ma ọ bụ ahịhịa na -afụkọta ya jikọta ya.
N'ịgbalị ka ijide ihu ahụ iwe na-asachapụ, setịpụ ihe niile na a matte, ntụ ntụ ma debe akara ngosi ahụ ka ọ dị obere, dobe ya naanị n'ebe ụfọdụ dịka n'okpuru ọkpụkpụ ihu gị na n'akụkụ ime anya gị.
Ngwa klọọkụ kacha amasị anyị: Mee elu -igwe maka ihe osise eserese oge ọ bụla Pro , E.l.f. Palette ngwe
Kwụpụ 2: Kpachara anya nyocha gị.
Maka nchapu ọkụ ma ọ bụ ụkọ, ọ ka mma ịmalite site na wax wax nke mere na agba ọ bụla ị na -eyi mgbe osisi jisịrị, Stewart kwuru. Jiri ahịhịa spoolie, tinye mkpuchi dị mfe nke waksị, wee hichaa ntutu elu na elu. Mgbe ahụ, jiri brọshụ nwere akụkụ, tinye ndò gị nke ịchọrọ na obere ọkụ.
ntutu ntutu ọhụrụ 2020 nwanyị
Ngwaahịa ihu kacha amasị anyị: Ihe ịchọ mma bara uru Goof Proof Brow Pen , Maybelline Eye Studio Brow Drama Sculpting Brow Mascara
Kwụpụ 3: Gbanyụọ nku anya.
Aghụghọ iji nweta anya dị ka nke Harley Quinn esiteghị n'otú i si emebi ndò gị - ọ bụ maka ụcha ị na -eji. Ọ bụ ezie na ndò mgbe niile dị oke mma ma nwee ike ịnye ụgwọ ịkwụ ụgwọ agba mgbe ụfọdụ, ọ kacha mma ịhọrọ ude ebe a. Ị nwere ike jiri mkpịsị aka gị rie ya ọnụ ma ọ bụrụ na-ịchọrọ, mana ị ga-etinye ya na ahịhịa na-ele anya ga-eme nke ọma. Iji nweta mmetụta ahụ gbawara agbawa, were ụcha ọ bụla fọdụrụ na ahịhịa gị site na ngwa mbụ wee dọrọ ya gaa na ala. Oh, echefukwala iji brushes abụọ dị iche iche maka uhie na acha anụnụ anụnụ gị. Ịgwakọta ha ga -eme ka agba abụọ bụrụ apịtị -ọ bụghị ọdịdị nke ị na -achọ ebe a.
Mgbe ịmechara ụdị gị, kpuchie anya nku anya kwekọrọ na ntọala gị iji tọọ anya. Ị nwekwara ike chọpụta na ọ na -adịrị gị mfe ijikọ ọnụ ọjọọ ọ bụla na ndò ntụ ntụ gị.
Igwe anya na -acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara anyị họpụtara: Emebere Onyunyo Aqua Cream Shadow na -acha ọbara ọbara na acha anụnụ anụnụ , NYX Jumbo Pencil na Rust na Peacock
Kwụpụ 4: Tinye nha n'anya gị.
Ka ịtinye ụfọdụ anya n'anya gị, kechie ha obere ihe mkpuchi anya nke eyeliner wee kpọnye n'ọnụ ya iji mepụta mmetụta dị ọkụ. Mgbe ahụ, bulie ntakịrị ntakịrị oji wee fegharịa ahịhịa na -agwakọta na mpụta mpụta. Iji mechie ya, tinye pensụl ọcha na mmiri mmiri gị maka mmetụta yiri nwa bebi.
Ngwa kacha mma etemeete ojii: Kwadebe pensụl Aqua XL na M-10 , L'Oréal Paris Eyeshadow adịghị agha agha na Black ebighi ebi
Nzọụkwụ 5: Layer na ewute.
Ugbu a maka akụkụ na -adịghị mma mana nke kacha atọ ụtọ: na -egbu maramara! Ozugbo inwetara ụcha acha anụnụ anụnụ gị na nke na -acha ọbara ọbara, nke mbụ, mee mmiri ahịhịa ahịhịa dị larịị. Ị ga -achọ ime nke a oge ọ bụla tupu itinye ya na -egbu maramara ka enwere obere mmebi. Mgbe ị na -etinye ihe na -egbu maramara, wepụta oge wee na -agba mmiri ahịhịa gị. Kpoo ya nwayọ wee soro ụdị nke i jirila anya anya gị mee - ọ nweghị mkpa imepụta ihe ebe a. Ntuziaka: Ọ bụrụ na ụkpaka ọ bụla adaa ebe, hichaa ya site na iji teepu Scotch.
Mgbe ị nwere afọ ojuju n'ogo ihie ị nwetara, tinye mascara na (nhọrọ) gbakwunye lashes. (Mpempe akwụkwọ aghụghọ anyị na itinye falsies, ebe a.)
uwe agbamakwụkwọ nkịtị maka oge ọkọchị
Glitter anyị na -echegbu: Make Up For Ever Glitter in Red na Blue , Ihe ịchọ mma na -agwụ ike nke ịchọ mma ịchọ mma na -acha ọbara ọbara na acha anụnụ anụnụ
Kwụpụ 6: Tinye lipstick na -acha ọbara ọbara wee see na egbugbu.
Emechaala nke ọma! Mgbe ị na -ahọrọ egbugbere ọnụ uhie gị, họrọ ude mmiri na -acha ọbara ọbara, nke ga -agagharị ngwa ngwa. Tinye ya dịka ọ na -adị, wee were mkpịsị aka gị ma ọ bụ obere ahịhịa ndò iji hichaa agba dị na egbugbere ọnụ ala ala ala. Mgbe ahụ hichapụ. Tinye akwa uhie ọzọ n'elu iji nwuo dị ka achọrọ.
Ugbu a maka egbugbu. N'ihi ịdị ike ya na ngwa dị mfe iji, eyeliner nwere mmetụta ojii na-arụ ọrụ kacha mma mgbe ị na-ese ụdị na okwu. Detuo ihe dị n'obi n'okpuru anya gị, kpọmkwem na apụl agba gị. Echegbula onwe gị ma ọ bụrụ na ị na -eme mkpọtụ - naanị jide n'aka na ị ga -enwe swab owu na ihe na -ezobe aka iji hichaa akụkụ ndị na -adịghị mma.
Maka egbugbu mebiri emebi, anyị na -adụ ọdụ ka enyi tinye ya na ya, naanị n'ihi na ime ya n'onwe gị n'enyo pụtara na ọ ga -apụta azụ. (Cheta rhinestone Karen nke 'K' n'ime Ụmụ agbọghọ pụtara ? Ee, nke ahụ bụ ihe na -eme mgbe ị na -achọ ide ihe na enyo.)
Red lipstick na -ahọrọ: Mee elu maka Artist Rouge Lipstick na M300 , Lipstick Pixi Mattelustre na -acha ọbara ọbara
Nzọụkwụ 7: Fesa na agba ntutu.
Ikpeazị mana ọbụghị opekata mpe: ụdị ọkaibe Harley Quinn mara mma. Ọ bụrụ na ịnweghị ntutu na -acha ọcha, enwere ọtụtụ Harley Quinn wigs n'ebe ahụ ị nwere ike iji. Mana ọ bụrụ na ị nwere ntutu na -acha ọcha ugbua, ọ ga -adịrị gị mma. Na enwere ụzọ dị iche iche iji nweta anya.
mmanụ kacha mma maka akpụkpọ ahụ dị nro na ihu
Ihe mbụ dị mkpa: Tinye ntutu gị na pigtails. (Bugharịa ha ụzọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha nwekwuo ohere.) Mgbe ahụ ị nwere ike họrọ ncha ntutu ntutu ma ọ bụ ịgba ntutu. Ịdọ aka na ntị: Ihe niile ga -adị mma, mana ọ bụrụ na ị na -ete ntutu isi n'elu, ekwesịrị idobe agba gị ruo awa ole na ole. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche iyi mkpuchi rọba ma ọ bụ rọba mgbe ị na -etinye ya.
Maka nzu ntutu, tee eriri gị n'ime ya ruo mgbe agba gbara ọchịchịrị ga -ezuru gị. Ị nwere ike ịme mgbagharị ole na ole tupu ezigbo ụcha amalite igosi. Maka ịcha ntutu isi, mee nke a na ime ụlọ ịsa ahụ gị - iguzo na ịsa ahụ kacha mma. Ka ị ghara ịchacha ntutu ebe niile, nwee mpempe akwụkwọ ọcha dị nso ka ị tụdo n'azụ gị mgbe ị na -afụ ọkụ.
Nhọrọ agba agba ntutu nwa oge: Ntọala Nkume Nkume Sugar , Jerome Russell Bwild Agba ntutu na -adị nwa oge na -acha ọbara ọbara na acha anụnụ anụnụ
Kpado nke a maka oge ọzọ.
Zụta ihe ndị ọzọ dị mkpa maka ejiji Harley Quinn
Ejiji Rubie Co Harley Quinn Ekike
$ 33 Amazon Zụta ugbu a
Ejiji Rubie Co Harley Quinn Kit Kit
$ 26 Amazon Zụta ugbu a
Harley Quinn Faux Lace Up Knee High Boot Socks
$ 11 Amazon Zụta ugbu a
Uwe Akara Akara Akara Ahịrị HDE
Olu olu Coolcoco Puddin Choker
$ 10 Amazon Zụta ugbu a
Mpempe Tattoo Harley Quinn nwa oge
$ 8 Amazon Zụta ugbu a
Ejiji Rubie Co. Harley Quinn bara uru Wig
$ 14 Amazon Zụta ugbu a
Squad igbu onwe ụlọ ọrụ Harley Quinn Soft Bat
$ 30 Amazon Zụta ugbu a
Ugbo Site Na Mpaghara
Ogige Ndị Ndò
black cohosh dosage maka ime ọpụpụ
shampoo na -acha odo odo kacha mma maka balayage
mfe ọkara ihu halloween etemeete
kacha mma ntụpọ mwepụ ude
esi eme ka akpụkpọ gị dokwuo anya